Uhlaziyo lwamva nje lweGPS S9 lusinika umsebenzi ofanayo we-selfie njengeGPS S10 | I-Androidsis
Uhlaziyo lwamva nje lweGPS S9 lusinika umsebenzi ofanayo we-selfie njengeGPS S10
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba inkampani yaseKorea i-Samsung isungula njani kwisizukulwane ngasinye esitsha sezixhobo kwi-Galaxy S, uthotho lwemisebenzi, imisebenzi ethi kungekudala emva kokufika ngohlobo lokuhlaziywa kwiitheminali zonyaka ophelileyo, imisebenzi engabonisi nakuphi na ukusikelwa umda ngehardware.
I-Galaxy S9 iqalile ukufumana uhlaziyo lwesoftware entsha apho kongezwa khona umsebenzi we-selfie osivumela ukuba sinciphise icandelo lombono xa sithatha ii-selfie ngokungagqibekanga. Ukuza kuthi ga ngoku, icandelo lekhamera langaphambili lokujonga kwi-S9 kunye ne-S9 + ngama-80 degrees. Emva kokufaka uhlaziyo olutsha oku ukuhla ukuya kuma-68 degrees.
Ngokunciphisa indawo yokujonga kwiidigri ezingama-68, xa sithatha i-selfie, iziphumo ziyanelisa ngakumbi kunokuba sizenza ngombono omkhulu, kuba siyakuphepha ukushiya indawo eninzi kakhulu kumacala omabini.
Ngokuzenzekelayo, intsimi yekhamera yangaphambili ijonge ngoku iidigri ezingama-68, nangona kunjalo, ukuba sifuna ukuthatha i-selfie yeqela, ukusuka kunxibelelwano lwekhamera uqobo, singayandisa ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-80, imo emiselweyo enikelwe kuthi ukusukela nge-S9 kunye ne-S9 + efika emarikeni.
Olu hlaziyo luphethe inombolo ye-firmware G960FXXU2CSC8 y G965FXXU2CSC8 ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-Galaxy S9 + ngokwahlukeneyo. Olu hlaziyo alusiniki kuphela uphuculo olusebenzayo kwikhamera engaphambili, kodwa lukwadibanisa ukuphuculwa kozinzo kunxibelelwano lweWi-Fi, ukuphuculwa kwemiyalezo kunye nesicelo soonxibelelwano nakwisihleli sevidiyo.
Njengoko bekulindelwe, ikwabonelela ngesiqendu sokhuseleko kwinyanga kaMatshi. Olu hlaziyo sele luqalisile ukubakho eJamani, ke ngumcimbi weeyure ngaphambi kokuba ufikelele kwamanye amazwe aseYurophu kwaye kamva kuwo wonke umhlaba. Ukuba awufuni ukulinda uhlaziyo, ungaya kwiwebhusayithi yeSamMobile kwaye khuphela uhlaziyo ukuyifaka ngesandla kwi-S9 yakho okanye kwi-S9 +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Uhlaziyo lwamva nje lweGPS S9 lusinika umsebenzi ofanayo we-selfie njengeGPS S10
Ishedyuli yeSamsung umsitho wango-Epreli olandelayo we-10: i-Galaxy A90 ekubukeni